Carruurta naafada ah – Abschir Hassan Foundation
Mashruuc & Wararka
Carruurta naafada ah
Inkastoo daryeelka, daryeel caafimaad iyo ka mid noqoshada bulshada waa mid aad u fog ee Germany mar hore, waxaad arki mar kale iyo mar kale ka mid ah in ay qaadataa ilmaha uu naafo looks badan oo jidka maraya, by.
Taasi laftigeeda ayaa waxba ma negative, laakiin marka ay timaado in laga saaro. Mid ka mid ogsoon tahay waxa macno ah haddii qof ayaa ku faqayaan ka dambeeya ka mid ah ama si fudud u dhigi Leexashadani a nagu wareegsan.
Dhinaca kale, mid ka mid barto oon sidoo kale soo dhoweyneynaa aragnimo fiican. Waxaa marar badan dadka kale toddobaadkan. Waxaan ku faraxsanahay in aan ka jawaabo su’aalo ku saabsan naafanimada wiilkaygu, gaar ahaan carruurta ahay.
Abschir sidoo kale qaba uu koboca iyo tamarta, dadka isaga ka ag dhow in.
Tani waa wax aad u gaarka ah ii.